Huawei Y9 2018: famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Huawei Y9 2018 vaovao: Ny elanelam-potoana vaovao misy fakantsary efatra
Nandritra ity MWC 2018 ity dia nanaitra ireo mpanatrika ny Huawei tsy nanolotra telefaona. Ny marika sinoa malaza dia hanolotra ny endriny avo lenta farany amin'ity volana ity amin'ny hetsika iray. Eo am-piandrasana ny hisian'ity hetsika ity dia tonga ny telefaona vaovao avy amin'ny orinasa. Hatramin'ny nanombohan'izy ireo ny Huawei Y9 2018 vaovao any Thailandy. Io ny telefaona farany ambany vaovao an'ny marika.
Finday iray azontsika raisina ho toy ny variant vaovao amin'ny Huawei Mate 10 Lite. Ka mety hisy antsipiriany sasany amin'ilay fitaovana toa anao. Efa fantatray ny pitsony feno amin'ny Huawei Y9 2018. Inona no azontsika antenaina amin'ny telefaona?
Ny telefaona dia nanatevin-daharana ny fironana mafana indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'ny lafiny iray, hitantsika ny a efijery misy zana-kazo tsara sy tahan'ny 18: 9. Ho fanampin'izay, nanatevin-daharana ny fironana ho an'ny fakan-tsary roa koa izy io. Satria ny Huawei Y9 2018 dia manana fakan-tsary indroa eo aloha ary fakan-tsary roa hafa ao aoriana. Ireto ny fiparitany:
efijery: 5,9 santimetatra IPS LCD miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 miaraka amin'ny 407 dpi
vahaolana: FHD + (2160 x 1080)
processeur: Kirin 659 (Octa-core Cortex-A53; 4 × 2.36 GHz sy 4 × 1.7 GHz Cortex-A53)
Fahatsiarovana anaty: 32 GB (Azo avela hatramin'ny 128 GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: 16MP + 2 MP
Fakan-tsary eo aloha: 13MP + 2MP
Rafitra fandidiana: Android 8.0 Oreo miaraka amin'ny EMUI 8
lanja: 170 gr
ny hafa: Fitaovana fakantsary aoriana, haingam-pandeha, gyroscope, akaiky ary kompà
Izahay dia miatrika ny elanelany misy ny feno indrindra. Miloka amin'ny famolavolana tsara, miaraka amin'ny famaritana izay toa solvent. Ho fanampin'izay, tonga fitsipika miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa. Zavatra tsy mitranga amin'ireo telefaona rehetra tonga eo amin'ny tsena.
Ity Huawei Y9 2018 ity dia efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Thailand. Ny vidiny hiova dia manodidina 200 euros. Tsy mbola nisy voalaza momba ny fanombohany tamin'ny tsena hafa. Manantena izahay fa hanome hevitra bebe kokoa momba io ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Y9 2018 vaovao: Ny elanelam-potoana vaovao misy fakantsary efatra
Ny Chikis dia hoy izy:
Rahoviana no hamidy izany any Mexico?
Valiny tamin'i El Chikis
Ny plugin Android tsara indrindra ho an'ny mpilalao mozika tianao
Ny Galaxy S9 + dia mahazo 4 amin'ny 10 amin'ireo tovolahy ao amin'ny iFixit